धेरै करियर लागि रक संगीतकार Efremov Valery साइन समूहमा "Leap गर्मी" र "समय मिसिन"। 37 वर्ष को लागि उहाँले उत्तरार्द्ध को स्थायी ढोल बजाउने व्यक्ति भएको छ, बडे को शीर्षक छ रूस को कलाकार, र राम्रो आकार मा रहन मदत गर्ने एक समूह को काम, साथै सक्रिय खेल गरिरहेको, हाम्रो laurels हासिल मा आराम गर्न जाँदै छ।
अभिनेता Efremov Valeriy Valentinovich डिसेम्बर 25 मा जन्म भएको थियो। यो Shumerlya, चुभास सोभियत संघ मा सन् 1953 मा भयो। उहाँले Mytischi, मास्को क्षेत्र मा माध्यमिक विद्यालय №2 मा अध्ययन, र त्यसपछि MSU मा भर्ना। अब उहाँले मास्को बसोबास। मकर - एक Horoscope मा। Chemist - पहिलो शिक्षा संगीतकार। उहाँले मास्को राज्य विश्वविद्यालय स्नातक र गर्दा लागि उहाँले संस्थान मा विशेषता मा काम गरे।
1979 मा Efremov मौलिक आफ्नो क्यारियर परिवर्तन र मा भइरहेको, यो ब्यान्ड "समय मिसिन" सामेल ड्रम। उहाँले रसायन स्कूल को धेरै रुचाउनु थियो भन्छन्, सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय मा दुई पाठ्यक्रम disaccustomed र त्यसपछि रूपमा "बन्द कटा" र संगीत सरेका। म एक समयमा यो आउन सक्छ बाहिर शासन छैन।
1981 मा उनले फिलिम "सोल", साथै आफ्नो समूह को अन्य सदस्यहरु मा तारा अङ्कित।
2000 मा उनले अस्पष्ट नाम अन्तर्गत एकल एल्बम Valery Efremov जारी "भ्रमित कथा।" यो समाचार लगभग एक अनुभूति भएको छ, तर यो पछि यो देखा मुर्खको मजाक ब्यान्ड "समय मिसिन", को ढोल बजाउने व्यक्ति गाए कहिल्यै रूपमा, साधन संग चरण पछाडि मा सधैं थियो।
म संगीतको लागि वेलेरिया penetrated गरिएको छ सबै प्रेम जीवन। आफ्नो स्कूल वर्ष समयमा, उहाँले विवाह र discos मा "Vanguard" को समूहमा Mytischi प्ले। हामी लगभग कुनै पनि मुग्ध पार्ने संगीतको प्रदर्शन। Efremov Valery त्यसपछि 1976 देखि 1979 को एक सदस्य थियो "Leap गर्मी।" को "समय मिसिन" मा, त्यो उहाँले rehearsals बेला सामाग्री कसरी खेल्न कुनै स्पष्ट निर्देशन थिए, र सबै सामूहिक को रचनाहरूको मा embodied को यूफोरिया साथ मा आविष्कार र चाँडै, कि मनपराएका 1979. मा सारियो।
जुन 24, 1999 Valery सम्मानित गरियो आदर को आदेश सांगीतिक कला को विकास मा आफ्नो merits लागि। घटना भएको "समय मिसिन" को thirtieth वार्षिकोत्सव संग एकै समयमा पर्नु गर्न समय सकियो थियो।
"पचास डलर गतिविधि" को उत्सव अघि टोलीले गर्नेछ कि बारेमा प्रश्न गर्न जवाफ, Valery यो तैयार सहमत जबसम्म यो सबै के भने कि आफ्नै संगीत बनाउन जारी गर्न तयार छ, मन छ समूह काम गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छ गरेनन्।
Valeriy Efremov जसको जीवनी, पूर्ण खुला व्यक्तिगत डाटा छैन, र उहाँले समूह को कन्सर्ट प्रदर्शन बाहिर कुनै पनि प्रचार नगर्न खोज्छ। सहकर्मी व्यावसायिक र मानव मामलामा आफ्नो विश्वसनीयता मूल्यांकन गर्छौं। कलाकार पत्नी मेरिना छ। केही स्रोतहरु मा उनको नाम मारियाना रूपमा सूचीकृत।
छोरा Valery Efremov - Valeriy Efremov जूनियर जवान विकासशील समूह 5sta परिवार को एक soloist छ। जवान हिप-हप मा लगी भएको छ, कम्प्युटर प्रविधिमा रुचि छ। उहाँले बैंकिङ को दिशा मा जनताहरु 'दोस्ती विश्वविद्यालय, अन्तरराष्ट्रीय स्कूल व्यवसाय को स्नातक।
रचनात्मकता र सोख
1979 मा पौराणिक ब्यान्ड को संरचना Valeriy Efremov सामेल गर्दा लोकप्रियता को एक नयाँ लहर आयो। "समय मिसिन" बस रचनात्मक टीम को पतन मार्फत रहेको छ। समूह तिनीहरूलाई एप्रैम ल्याउन फर्काउँछ Kutikov। नयाँ लाइन-अप गीत "गर्नुहोस्", "क्रिस्टल शहर", "मैनबत्ती" र देखा "कसले तपाईंलाई आश्चर्य गर्न चाहनुहुन्छ।" त्यसै वर्ष मा, "समय मिसिन" Rosconcert मा मास्को थिएटर दौरा कमेडी रूपमा सब। 1980 मा, समूह "स्प्रिंग Rhythms" भनिन्छ सबै-रक तिहार मा विजेता भयो, र श्रोताहरू लाखौं को पहिचान हुन्छ।
रूपमा पछि, आफ्नो memoirs Efremov भन्छन् मा, थिएटर तिनीहरूलाई लागि योग्य अधिकारीहरु को शङ्काको जगाउने छैन ताकि जो तिनीहरूले गरे वास्तविक काम, को लागि कवर एक प्रकारको थियो।
सांगीतिक गतिविधिहरू साथै Valeriy Efremov एक अर्को रोमाञ्चक शौक फेला - चलाउनुहुन्छ। यो खेल उहाँलाई घेर ध्वनि रमाइलो गर्न, उनको सुन्न, प्रकृति संग एक्लै हुन अनुमति दिन्छ।
को जेट मा स्कूल र कलेज वर्ष मा windsurfing Valery keen क्रस-देश र डाउनहिल स्किइङ, टेनिस, स्पोर्टी सवारी बाहेक।
पैतृक (Discography, Filmography)
Efremov Valery मात्र होइन संगीत खेल्छ, तर पनि धेरै चलचित्रमा तारा अङ्कित। तिनीहरूमध्ये: "प्राण" "को बिट मा छ वटा अक्षरहरू", "रक र भाग्य", "सुरु।"
Discography एकदम 35 वर्ष को लागि व्यापक। मात्र आधिकारिक एल्बम 11 टुक्रा। मई 2016 मा TBA भनिन्छ 12 औं जारी गरिनेछ। सात प्रत्यक्ष एल्बम र संग्रह को 22, र रेकर्डिङ आधिकारिक Discography एक धनी सामान छन् र पूरै क्यारियर कर्मचारी प्रतिबिम्बित।
Efremov Valery - सरल, संक्षिप्त र खुला व्यक्ति, आफ्नो drumming जस्तै। दीर्घकालीन सह-सञ्चालन र प्रसिद्धि को परीक्षण द्वारा प्रमाणित रूपमा ब्यान्ड सदस्य, उहाँलाई एक विश्वसनीय मित्र र वफादार सहकर्मी विचार गर्नुहोस्। यसलाई आफ्नो साथीहरू र रचनात्मक मित्र साँचो नयाँ संगीत र रचनाहरूको आफ्नो प्रशंसक delighting, हालसम्म रहन सम्पूर्ण टोली लिएर मार्फत।
अष्ट्रीया लोक नृत्य: इतिहास र modernity
क्लाउड-र्याप शैली संस्थापक, प्रदर्शन गर्ने के हो
Alexei Semenov: जीवनी, पेसा, गायक र निर्माता को व्यक्तिगत जीवन
Sati Kazanovoy सबै: जीवनी र काम
नेटली Podolsky: जीवनी र परिवार (फोटो)
संसारको सबैभन्दा विषालु jellyfish के हो?
सामाजिक डेमोक्रेट अगस्ट Bebel: जीवनी, क्रियाकलाप र रोचक तथ्य विशेषताहरु
एक एक्वैरियम बनाउन - ब्रह्मांड बनाउन
प्रेम बारेमा राम्रो चलचित्र सुझाव दिन्छौं ... प्रेम बारेमा सबै भन्दा राम्रो चलचित्र-गीतिनाटकहरू सूची
Rory Gallagher: जीवनी र काम
Recapitalization के हो? क्रेडिट संस्थाहरु को Recapitalization
प्रशोधन ओछ्यानमा त्रुटिहरू को घर: लागूपदार्थ
के YAMIK कैथिटर? सिद्धान्त र प्रक्रिया को लाभ